Maamulaha Telegram wuxuu ku martiqaadayaa inuu ka tago iOS una guuro Android. Sababta | Androidsis
La dagaal u dhexeeya Android iyo Apple wuxuu ku jiray wararka sanado badan. Laba ku wajahan nidaamka deegaanka in ka badan toban sano taasna waxay leedahay faa'iidooyinkooda iyo khasaarahooda. Dabcan, sida uu sheegayo Pável Dúrov, agaasimaha guud iyo aasaasaha Telegram, Waxa ugu fiican ee adeegsadayaasha iPhone ay sameyn karaan waxay u beddelaan Android.
Sababta? In shirkadda leh tufaaxa la qaniinay ay si weyn u xaddideyso adeegsiga qalabkeeda. Runtuna waxay tahay inaysan jirin sabab la’aan, maadaama aadan rakibi karin codsiyo ka baxsan kaydka arjiga Apple, halka Android wax walbana ay fudud yihiin.
Pável Dúrov waa cad yahay: iska iloobo iPhone-ka oo ku dheji Android
In kasta oo ay run tahay in aad xiri karto si aad u kordhiso fursadaha iPhone-ka, laakiin waa geedi socod aad u dhib badan oo ku lug leh dhibaatooyinka qaarkood, sida luminta dammaanad-qaadka haddii aadan aqoon sida dib loogu celiyo aaladda, taas oo noqon karta madax-xanuun dhab ah . Halkii, On Android waxaad ku rakibi kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee codsiyada qaabka APK si fudud.
In ka badan wax kasta maxaa yeelay kuma tiirsanaan Google Play Store si aad u rakibtid dhammaan noocyada barnaamijyada. Tanina waa faa iido weyn oo ah, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee Telegram, inuu sameeyo isbadal muuqda.
«Taasi waa sababta aan ugu boorrinayay dadka isticmaala inay ka beddelaan macruufka illaa Android; waa waxa ugu yar ee ay sameyn karaan si ay u ilaaliyaan helitaanka qulqulka macluumaadka bilaashka ah«, Horumariyaha Ruushka wuxuu ku qoray boggiisa Telegram, tan iyo markii la codsaday Parler, oo ah shabakad bulsheed oo si weyn ay u isticmaalaan kuwa raacsan Donald Trump oo aan hadda laga helin App Store iyo Google Play, ayaa dhowaan laga saaray. Laakiin dabcan, waxaad had iyo jeer soo dejisan kartaa APK, oo aad sii wadaysaa adeegsiga abkaaga Android.
Sida Dúrov tilmaamayo, «Haa, labada dhinac ee Apple-Google waxay dhibaato weyn ku qabaan xorriyadda marka loo eego Twitter. Apple ayaa ka khatar badan labada maxaa yeelay waxay gabi ahaanba xaddidi kartaa barnaamijyada aad isticmaasho«.
Way cadahay in Android ay faa iido weyn ku leedahay macruufka dhinacyo badan. Iyo xaqiiqda Awood u lahaanshaha rakibida dhamaan noocyada kala duwan ee codsiyada si looga faa iideysto maxadkeena waa qiime in, sida uu sheegay Maamulaha Telegram, ay ku tusineyso isu dheelitirka nidaamka qalliinka Google. Waxaan ku leenahay tusaale wanaagsan YouTube La Waayay, App aad uga badan YouTube-ka marka laga hadlayo xagga shaqeynta oo aad kala soo bixi karto oo keliya meel ka baxsan dukaanka barnaamijka. Oo ma kula tahay?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Maamulaha Telegram wuxuu cadeeyaa: hadaad rabto asturnaansho iyo xorriyad, ka tag Apple oo sharad ku dhig Android